ဝန်ထမ်းလစာ နှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ၀န်ထမ်းလစာ နှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ
၀န်ထမ်းလစာ နှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ
Posted by leonus007 on May 26, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ဂျာနယ်တွေထဲမှာ အစိုးရက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စတွေကို တိုက်ဖျက်မယ့် အကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ မိန့် ခွန်း အတိုင်း မူဝါဒ အနေနဲ့သန့် ရှင်းသောအစိုးရ၊ ကောင်းသောအုပ်ချုပ်မှု စတာ တွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ လုပ်နေကြတာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပပျောက်အောင် လစာတွေကို တိုး ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလဲ ဖတ်လိုက်ရတော့၊ အဲဒီမှာပဲ မတင်မကျဖြစ် နေတဲ့ကိစ္စ က ၀န်ထမ်းလစာ တိုးလိုက်ရင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပပျောက်သွား နိုင်သလား ဆိုတာကိုပေါ့။ စိတ်ဝင်စား စရာ အချက်က ၀န်ထမ်း တွေက အခြေခံ လိုအပ်ချက် စား ၊ ၀တ်၊ နေ ရေး လောက်ငှ ယုံနဲ့တင်းတိမ် နေနိုင်ပါ့မလား။ အဓိပ္ပါယ် က ဖုန်း မလိုချင်တော့ဘူးလား၊ ကားမလိုချင်တော့ဘူးလား၊ Shopping Mall မှာ ဈေးမ၀ယ်ချင်တော့ဘူးလား။ ဖုန်း နဲ့ ကား ဆိုတာက ရန်ကုန်လို မြို့ ကြီးမှာ ဇိမ်ခံ ပစ္စည်း လို့ တစ်ဖက်သတ်ပြောလို့ မရတော့ပါဘူး။ လိုအပ် ချက်ဖြစ်လာပါပြီ။ ထိုင်း လို ဖွံ့ ဖြိုး ဆဲနိုင်ငံ မှာတောင် အလယ်အလတ်တန်း ၀န်ထမ်း တွေ ကားဝယ်စီးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းဆိုတာကတော့ အနိမ့် ဆုံး အလုပ်သမား တောင် သုံး နိုင်တဲ့အရာပါ။ ဆိုလို ချင်တာက ၀န်ထမ်း တွေရဲ့အခြေခံ လိုအပ်ချက် ကို စား၊ ၀တ်၊ နေ ရေး နဲ့ ပဲ စံထားအုံးမှာလား။ ဖုန်း တွေ ကား တွေ ကို ၀န်ထမ်းတန်းစေ့ ပေးနိုင်အောင် တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဈေး တွေ ပေါသွားအောင်တော့ မူဝါဒ ကို ပြင်လိုက်ရုံ နဲ့ ရနိုင်တာပဲ။ ပြီးခဲ့ တဲ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး မှာ ဒီကား ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြော ကြပြီးတဲ့နောက်တော့ ၅၅ သိန်းတန် ကားရောင်းမယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာရော။ ဒါပေမယ့် ၀ယ်တဲ့သူ တိုင်း ကို ရောင်းနိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀ယ်ချင်တဲ့သူ တွေ လျှောက်လွှာတင်ထား ပြီး ကျမယ့် ရက် မသိ ရပဲစောင့် နေရတာမျိုး ဆိုတော့ ရောင်းတယ်လို့ပြောရမှာလား မရောင်းဘူးလို့ ပြောရမှာလားတောင် မသိတော့ပါဘူး။ အခုတော့ လို ချင်တဲ့သူတွေက ၅၅ သိန်းတန် ကားကို သိန်း ၁၀၀ ကျော် ပေးပြီးဝယ်စီးကြတယ်ဆိုတော့ ထုတ်ဈေး ပေါက်ဈေး ကွာခြားချက် ကို တွက်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။ ၅၅သိန်းတန် ကားကို သိန်း ၁၀၀ ကျော်နဲ့ ရောင်းလို့ ရရင် ကားဝယ်ခွင့် ပါ မစ်ကို သိန်း ၂၀ နဲ့ လဲ မယ်ဆိုရင် လိုချင်တဲ့ စီးပွားရေးသမား တွေတန်းစီ နေမယ်ဆိုတာလဲ သေချာပါတယ်။
ပြောချင်တာက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စဆိုတာက လာဘ်ယူ မှ ရမဲ့ အခြေအနေမျိုး နဲ့ လာဘ်ပေးမှရမဲ့ အခြေအနေမျိုး က ဒီနိုင်ငံ မဖြစ်မနေကြုံနေတာဆိုတော့ ဒီ အခြေအနေ ထဲက တစ်ခုခု ပြတ်မှပဲ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းနိုင်မှာပါ။ လာဘ်ယူတဲ့သူ ကလဲ ခေတ်နဲ့ အညီ လူတန်းစေ့ နေချင်ကြတော့ ရတဲ့ ၀န်ထမ်း လစာ ကလဲ မလောက်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် လာဘ်ရ ဖို့ ဖန်တီးလာရော၊ လာဘ်ပေးတဲ့သူကလဲ လာဘ်မပေး ပဲနဲ့ ကိစ္စက မပြီးနိုင်တော့ လာဘ်ပေးရရော။ စီးပွားရေး သမားဆိုရင်တော့ ဒီလာဘ်ပေးရတဲ့ ငွေကို ရောင်းကုန် အမြတ်မှာထဲ့တွက် လိုက်တော့ စားသုံးသူက ခံရရော။ ဒါပေမဲ့လဲ ဒီစားသုံးသူ ဆိုတာကလည်း လာဘ်ပေးသူ ကော လာဘ်ယူသူ ပါ တစ်နေရာက နေ ၀င်ပါနေရတာပါပဲ။
ဒါဆိုရင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ က တခြားနိုင်ငံတွေ မှာကော မရှိဘူးလားဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတိုင်း မှာတော့ ရှိတာပါပဲ။ ပြောရရင် အသေး အကြီးတော့ ကွာတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တွေ ဖြစ်တဲ့တရုတ် တို့ ထိုင်း တို့ မှာလဲ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပေါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဆီမှာက နေရာတိုင်း မှာတော့ မရှိဘူး ။ ဥပမာ လေဆိပ် ဆင်ဝင်အောက် မှာ ကားမရပ်ရဘူး ဆိုပြီး လာတားတဲ့ ရဲကို ပိုက်ဆံ ပေးပြီး ကားထားလို့ ရအောင် လုပ်လို့ ရတာမျိုး မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ငွေပမာဏ များစွာ တန် တဲ့ စီမံကိန်း ကြီးလို မျိုးဆိုရင် တော့ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ကြတယ်။ သေချာတာကတော့ ကျောင်းတွေမှာ၊ ဆေးရုံမှာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေမှာ ပြည်သူ နဲ့ ပုံမုန် ဆက်ဆံမှု လုပ်တဲ့ အစိုးရ ရုံးတွေ မှာ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ မရှိပါဘူး။
ကျွန်တော့်ရဲ့ လတ်တလော တွေးမိတဲ့အတွေးလေး သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဖတ်မိသူတိုင်း ကိုယ့်အမြင်ကို ဝေငှပေးကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
View all posts by leonus007 →
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက မြန်မာ့လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာအမြစ်တွယ်နေပြီဖြစ်သလို အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးမှာသော့ချက်ဖြစ်နေပါပြီ။ မွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးသေတဲ့အချိန်အထိ ဒီကိစ္စနဲ့ ကင်းနိုင်တဲ့ အချက်ကလေးတခုလောက်ရှိရင်ထောက်ပြကြပါ။
ပေးတဲ့သူရဲ့ငွေ (သို့) ပစ္စည်းကို အထက်အရာရှိမင်းဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်း မဟုတ်သူကဘဲဖြစ်ဖြစ် ယူလိုက်ရင်ဘဲ ဒုလ္လဘကြီးတခုဖြစ်သွားသလို၊ ကိစ္စတခုအတွက်ပေးကြသူတွေထဲ(လေလံစနစ်လို) က ကိုယ့်ကိုပြန်ချိမြှင့်စောင့်ရှောက်ဆောင်ရွယ်ပေးရင်ဘဲ၊ တော်တော်ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမဲ့ခေတ်ကြီးပါ။
ပေးတိုင်းမရပါဘူး။ ဦးအောင်ပေးနိုင်ယုံမက လုပ်ပေးနိုင်သူလက်ထဲ တည့်တည့် ရောက်သွားဘို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။
နေ့စဉ်သတင်းစာတွေမှာ…..”ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များလမ်းညွှန်မှာကြားသွားခြင်း” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရစကားစုရှိနေသေးသရွေ့၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ အတတ်ပြောနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
ဟိုးးးးးးးးးးအရင်တုန်းက ကိုယ့်ကို ကိစ္စပြီးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရင် ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ငွေပေးတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ကိုယ်ပေးတဲ့အထိ မစောင့်တော့ပဲ တောင်းတယ်။ အဲဒီနောက်ကျတော့ ဘယ်လောက်ရမှဆိုတာ အရင်ညှိပြီးမှ လုပ်ပေးတယ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်။ တချို့ကတော့ ဟိန်းဟောက်ပြောဆိုပြီး များများထွက်အောင် ညှစ်ကြတယ်။
လက်ငင်းဘဝ ရပ်တည်မှုပြေလည်ရေးအပြင် ပင်စင်ယူတဲ့အခါ အနာဂတ်ဘဝ လုံခြုံဖို့လည်း အရေးကြီး ပါတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပင်စင်စားများရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့တဲ့အခါ ဝန်ထမ်းများအားလုံး အကျင့်ပျက်ခြစားပါတော့တယ်။ ငွေကြေးတန်ဖိုးကို ရေရှည်တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းထားပြီး လောက်ငှတဲ့ လစထောက်ပံ့ငွေ ပေးခြင်းဟာ ပြသနာကို လျော့ပါးသွားစေနိုင်တဲ့ အချက်တချက်လို့ မြင်ပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့ကို ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်စိမ်း၊ သစ်တော၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းနဲ့ သဘာဝသယံဇာတ ရောင်းရငွေတွေကို ရေရှည်ရေတို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ ကဏ္ဍတွေမှာ အလုံးအရင်းနဲ့သုံးပါ။ စစ်အသုံးစရိတ်၊ ထောက်လှမ်းရေး အသုံးစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျော့ချပါ။ လက်တွေ့မှာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို တည်ထောင်ပါ။ ပြည်တွင်းစစ်ကို ရပ်စဲပါ။ ဒါကရော လက်တွေ့ဆန်ပါ့မလား။ အင်း….သဂျီးကိုသာ မေးကြည့်ပါတော့၊ သူက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဆို သမတဂျီးဆီ ဒူးထောက်အသနားခံဖို့ ဝန်လေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး….
ကျွန်မမိတ်ဆွေ ၀န်ထမ်းအရာရှိတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ် …
လူတွေက အစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုတာနဲ့ သူခိုး (လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဖြင့် ချမ်းသာသူ) (သို့မဟုတ်) ဆင်းရဲသား (၀န်ထမ်းလစာတစ်ခုထဲဖြင့် မွဲတေနေသူ) လို့ပဲ မြင်ကြတယ်တဲ့ ….
နောက်မှ ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်မထင်မြင်ချက်ကို ရေးပါအုန်းမယ် …
wei wei ပြောတာမှန်ပါတယ်
၀န်ထမ်းဆိုတာနဲ့ အောက်ဆိုဒ်ကို ပြေးမြင်နေကြတယ်ဗျ
ဘာမှမရပါဘူး (လူကြီးက ပေးတဲ့မုန့်ဖိုးပဲရပါတယ်လို့ဖြေရင်လည်း) တော်တော်အသုံးမကျတဲ့သူဆိုတဲ့
လာဘ်ယူသူက အကျိုးမှန်ဖို့ အညစ်တန် တာ တွေ ရှိ သလို၊ လာဘ်ပေးသူက တော့ အကျိုးလို လို့ ညောင်ရေလောင်း ကြ တယ်။
ဘာပဲ ပြောပြော သူတို့ ရဲ့ ဆောင်ပုဒ် အရ ပြောရမယ်ဆိုရင် ၀န်ထမ်းကောင်းမှ တိုင်းပြည်ကောင်းမယ် လေ။
ခု အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား က ၀န်ထမ်းအားလုံး အတွက် လစာ မကောင်းပေ မဲ့ ၀င်ငွေ ကောင်းစေ နေတော့
၀န်ထမ်းတွေ ကိုယ်တိုင် ကို က ဒီအုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား စနစ် ကြီး ပျက်မှာ စိုးနေ မလားပဲ။
အပျက်ဘက်ကိုချည်း ပြောနေလို့တော့ဖြင့် မတော်ဘူး..
အဲဒီလို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်..
လက်ရှိအစိုးရ အနေနဲ့.. ဘာတွေများ ဆောင်ရွက်သင့်သလဲ.. အချိန်ဘယ်လောက်ယူသင့်သလဲ..
လက်ရှိအစိုးရ အနေနဲ့.. တုံ့ပြန်မှု.. လှုပ်ရှားမှုတွေ နှေးနေရင်.. အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေ မဟုတ်တဲ့..
သူတွေ အနေနဲ့. ဘယ်လိုများ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြမလဲ…
ဥပမာ.. ၀န်ထမ်းတွေကို လာဘ်မပေးဘဲ. ..ကိုယ်တိုင်လည်း မရရင်နေဗျာလို့ နေကြမလား…
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကြီး ဖြစ်တဲ့.. ဂျာနယ်.. မဂ္ဂဇင်း.. မီဒီယာများက တစ်ဆင့်.. ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးကြမလား..
good ပြောထားသလိုတော့ ၀န်ထမ်းတွေကချည်း လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စကို ဖန်တီးနေတာမဟုတ်ပါဘူး…
တစ်ကယ်တမ်း ဖန်တီးသူက ၀ိသမ လောဘသမား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများရယ်ပါ..
ပေးတဲ့သူက ပေးလို့ ယူတဲ့သူက ယူဖြစ်ကြတာပါ..
ဒါကြောင့်.. ဒီအုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားစနစ်ကြီးပျက်မှာ… စိုးရိမ်နေသူများကတော့.. ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးသော.. လုပ်ငန်းရှင်များပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…
ကိုကြောင်ကြီး ပြောတာ သဘောကျပါတယ်..
အဲဒီလိုပဲ.. ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့.. အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အမြင်ကသာ အရေးကြီးပါတယ်..
ပြဿနာတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်.. (မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့…ပြင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်များ)ကိုသာ ပြောနေမယ်ဆိုရင်.. ဘယ်တော့မှ ပြောလို့ဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး…
တံငါသည်နားက လာဘ်တောင်းမိလို့.. ကြိမ်ဒဏ် ငါးဆယ် ခံရတဲ့ တံခါးမှူးအကြောင်းတော့ကြားဖူးမှာပါ…
အဲဒီအကြောင်းပြောနေတဲ့သူတွေက တံငါသည်လောက်မှ အနစ်နာ မခံနိုင်.. စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမပြုနိုင်ရင်… လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စတွေက ဘယ်တော့မှ လျော့ပါးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး..
ဘာကြောင့်ဆို… အဲဒီလိုပြောပြောပြီး.. ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတာကြောင့်ပါ…
ယူသောလက် : ကျုပ်တို့က လျှပ်လဲပြက်မပြဘူး၊
မိုးအလိုလို ရွာမှသာ ရေပုံးလေး ချပေးထားတာပါ။
ဖားတွေကို အစာကြွေး အသံတွေပေးလို့၊
ယူသောလက်။ ကျုပ်တို့က အပင်ပေါ်ကအသီး
ယူသောလက် : အသာလုပ်ပါ
ပေးသောလက်: မကြွေ မရွာ လို့ကတော့၊
အဲဒါတစ်ညမိုးကြိုးတွေထစ်ချုန်း ကြောက်လွန်းလို့ကျနော်ကုတင်အောင်ဝင်ပုန်း အသံဆုံးတော့ထွက်လာတဲ့အခါ
ဒါကတော့လာဘ်ပေးလာဘ်ယူနဲ့ပါတ်သက်ပြီးကျနော် မနှစ်တုံးကရေးပြီးရွာထဲမှာတင်ဘူးတဲ့
ကဗျာလေး မဖတ်ရသေးသူများနဲ့ဖတ်ပြီးသူများပြန်ခံစားလို့ရအောင် မန်းလိုက်ပါတယ်။
၀န်ထမ်းတွေလာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စဟာ လွယ်ကူရိုးစင်းပြီး အရေးယူရုံနဲ့ပြီးသွားနိုင်မဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်ဟုထင်ပါသည်၊ အရင်းစစ်တော့အမြစ်မြေက ဆိုသလို စားဝတ်နေရေးမလုံလောက်တဲ့ ၀န်ထမ်းလစာကကြာလာတော့ အူမ မတောင့်တော့ သီလမစောင့်နိုင်ပဲ နဲနဲစားရာကနေ များများစားလာကြတယ်ထင်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတယောက်ဟာ မိန်းမတယောက်နဲ့ ခလေးတယောက်ကိုတာဝန်ယူနိုင်မဲ့လစာလောက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးအရေးကြီးတာက နိုင်ငံရဲ့ စီးပွါးရေးအခြေခံကိုခိုင်ခံ့အောင်တည်ဆောက်ပြီးမှသာဖြေရှင်းလို့ပြေလည်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ ပျက်ပြီးသားကိုပြန်ပြင်ရတာပိုခက်ပါတယ်။ အကြောင်းတရားအမှန်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးဖြေရှင်းနိုင်ရင် ပြေလည်သွားမှာပါ၊ တနွယ်ငင်တစင်ပါဆိုသလို ဖြေရှင်းတဲ့နည်းမှန်ရင် တခုပြီးတခုပြေလည်သွားမှာပါ၊ မမှန်ရင်တော့တခုပြီးတခု side effect တွေထပ်ထပ်ပေါ်လာမည်ထင်ပါကြောင်း….။
အရေးယူရုံနဲ့ ပြီးသွားနိုင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး…
ကြာတော့လည်းလေ… တစ်ကယ်ပဲ မြက်ပေါက်လာခဲ့တယ်..
ဒီလိုနဲ့… စားသင့်တာလေးကို စားပေါ့… အဲဒီမြက်တွေကို စားပေါ့.
ပထမတော့ သတိလေးနဲ့ ၀ါးပါတယ်… ငါ ၀ါးနေတယ်… ငါဝါးနေတယ်ပေါ့..
အဲဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးနေခဲ့တယ်…
ကြာတော့လည်း.. ၀ါးလို့ ၀ါးမှန်းမသိ ၀ါးနေခဲ့တယ်..
တစ်ကယ်ကို အရင်းစစ်တော့ အမြစ်မြေက ဆိုသလို…
ကုမ္ပဏီတွေမှာ လစာကောင်းကောင်းရနေတဲ့ ၀န်ထမ်းများ လာဘ်စားဖို့ သတိရကြရဲ့လား..
အကြမ်းအားဖြင့်တော့.. လူအတော်များများက ဓမ္မနဲ့ အညီနေချင်ကြပါတယ်..
ဘယ်သူကမှ ငြိုငြင်ခံနေရတဲ့ ဘ၀ကို မလိုချင်ပါဘူး..
အဲ.. နောက်တစ်ခု ပြောပြမယ်..
ကျုပ်တို့နယ်မှာ.. သစ်တွေ အရမ်းခိုးထုတ်တယ်ကြားတော့..
အရမ်းလည်းတော်..စာအုပ်ကြီးလည်း သိပ်ဆန်တဲ့ အရာရှိတစ်ယောက်ကိုလွှတ်ပြီး ကြီးကြပ်စေပါတယ်.
ပြီးတော့ သူက ငယ်လည်း ငယ်သေးတော့.. မိဘများနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သိပ်ချမ်းသာတော့..
နောင်တစ်ချိန်မှာ ရာထူးတိုးချင်တာကြောင့် နံမည်လည်း လိုချင်သပေါ့.
ဒါကြောင့် ဖမ်းမယ် ဆီးမယ်.. တရားစွဲမယ်.. ထောင်ချမယ်တွေ လုပ်ပါတယ်….
ဒီကိုလည်း ရောက်လာရော… ပထမတော့ဖမ်းပါတယ်… အဲဒီ အဖမ်းခံရသူများက..
သူနဲ့ ရအောင်တွေ့ပါတယ်.. မင်းကြီး ဘာလိုချင်လဲပေါ့.. မင်းကြီးက ဘာမှ မလိုချင်ဘူး.. ခင်ဗျားတို့ကို ဖမ်းတာ..
အဲဒီမှာ မင်းကြီး ပြဿနာ တက်တာ.. သူ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့…
စီးပွားပျက်သူများက စီးပွားဖျက်သူကို လုပ်ကြံဖို့ ၀န်မလေးတဲ့နေရာမျိုးပါ…
နောက်တော့လည်း အဲဒီမင်းကြီး.. ပေးတာယူရရှာပါတယ်.. စောဒက မတက်ဝံ့ပါဘူး…
ကဲ.. ဒီပြဿနာကိုလည်း ရှင်းကြပါဦး..
ဟုတ်ပါတယ်…သေချာတာက.. စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံတွေ ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်…
အဲဒီလို စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံတွေ ခိုင်မာဖို့ ပညာရေး ကဏ္ဍ… ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ တွေတောင့်တင်းဖို့လိုပါတယ်..တစ်မျိးသားလုံးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာရည်မြင့်မားရေးပေါ့..
အော်နေတာတွေကတော့ သိပ်ကောင်းပါတယ်.. တစ်ကယ် မလုပ်ဖြစ်တာပဲ ခက်တာ…ဟုတ်တယ်ဟုတ်..
နီးစပ်ရာ လွှတ်တော်အမတ်မင်းများကို ကူညီပံ့ပိုးရင်း..ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေကိုလည်း တင်ပြပေါ့..
ကိုယ်လိုချင်တာတွေကို ယူဖို့ဟုတ်ဘူးနော်.. ကိုယ်အပါအ၀င် ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းဖို့..
အဲဒီကနေတစ်ဆင့်… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ.. ကိုယ်နှစ်သက်သဘောကျသူကို ဖြစ်စေ…ပြောရေးဆိုပိုင်ခွင့်… ရှိသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်… ပြောရေးဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသူများကို နားလည်အောင် ပြောဆိုစည်းရုံးရပါမယ်….
ထိုမှတစ်ဆင့် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်..
ကိုပေါက် ပြောခဲ့သလိုပါပဲ…အပြင်မှာအော်နေလို့ မထူးပါဘူး..၀င်ကြည့်ကြပါ..
တရားရုံးမှာ ပြောတဲ့စကားသာ အတည်ပါ… ဒါကြောင့် လွှတ်တော်မှာ စကားပြောနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါ..
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုလည်း မုန်းတီးနေမယ့်အစား.. ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်တတ်လာအောင် ဗိုလ်ချုပ်မဖြစ်သေးသူများကို စပြီး စည်းရုံးကြပါ…
ပြီးတော့…. မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားတည်ဆောက်ရမှာပါ…
ဒီလိုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများစွာသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို သာယာချမ်းမြေ့စေနိုင်မယ့်နေ့ကို မျှော်ကြည့်နိုင်မှာပါ…
ကျနော့အမြင်ကတော့ ၀န်ထမ်း၁၀ယောက်မှာ ၈ယောက်လောက်က ခိုးဝှက်နေရင် လာဘ်စားနေရင် အုပ်ချုပ်မှုစံနစ်မှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေပြီ၊ ၈ယောက်ကမှန်ကန်ပြီး ၂ယောက်လောက်က ခိုးဝှက်နေရင် လာဘ်စားနေရင် အဲဒီလူ၂ယောက်မှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေပြီလို့ထငိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားေ၇းအကောင်းဆုံး ၂နိုင်ငံ..ယူအက်စ် တရုတ် က… အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်တွေလည်း…လာဘ်စားပါတယ်..။
ယူအက်စ်ကတော့… မီဒီယာနဲ့ပြန်ထိန်းပေးထားပြီး.. တရုတ်ကတော့.. ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေနဲ့ ပြန်ထိန်းပေးထားတယ်…။
မြန်မာပြည်ပုံစံနဲ့က.. မီဒီယာနဲ့ ထိန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်…။
မြန်မာပြည်ပုံစံနဲ့က.. မီဒီယာနဲ့ ထိန်းလို့ကတော့ ရယ်တာပေါ့….။ ပေးတဲ့သူကော ယးတဲ့သူကော အရေးယူမှ ပျောက်မှာ…။
မြန်မာပြည်မီဒီယာက.. ပုံစံမမှန်သေးဘူး..။ ဒီတော့ မီဒီယာလို့ပြောတိုင်း.. မြန်မာပြည်ကလုပ်နေတဲ့.. စာနယ်ဇင်၊အင်တာနက်လောကနဲ့တော့… မနှိုင်းကြည့်စေချင်ဘူး..။
၀န်ထမ်းတယောက်ကို.. လာဘ်ပေးရမဲ့ကိစ္စတခုမှာ.. မီဒီယာသမားက.. စပိုင်ကင်မရာခိုးယူသွားပြီး.. အကုန်မှတ်တမ်းတင်…
လူတွေကိုဖွင့်ချပြလိုက်တာမျိုး.. (ဒီခေတ်)မြန်မာပြည်မှာလုပ်ကြသလားလို့.. မေးရမှာပဲ..။
မီဒီယာတာဝန်က.. ဤသို့ဖြစ်နေပါသည် ဆိုပြီး လူထုကြီးကို… အချက်အလက် ချပြဖို့ပဲ..။
အဲဒီလို လဘ်စားတဲ့လူတွေ အုပ်ချုပ်ေ၇းအာဏာကိုင်ထားရင်.. ရာထူးနေရာကဖယ်ခိုင်းဖို့က… ဥပဒေပြုအာဏာကိုင်ထားတဲ့.. လူတွေအလုပ်ပဲ..။
ယူအက်စ်မှာ.. သူဌေးရေး..။ အစိုးရေ၇ာကို… လွတ်တော်အမတ်(ဥပဒေပြုအာဏာကိုင်)တွေက.. ကော်မရှင်ဖွဲ့ ပြိး ခဏခဏစစ်တယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ.. ရှိတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေ.. (ဥပမာ) ဦးတေဇကို ခေါ်စစ်ကြတာမျိုး လုပ်သင့်တယ်..။
ငွေတွေဘယ်လောက်ရှိသလည်း..။ အခွန်ဘယ်လောက်ဆောင်သလည်း..။ ဘယ်သူတွေကိုလာဘ်ပေးထားလည်း..။
ဥပမာ…။ဥပမာ ပြောတာနော ..
(ဥပမာ။ .. တလောတင်.. ရေနံကုမ္ပဏီ စီအီးအိုတွေကို… ကွန်ဂရက်က.. ခေါ်စစ်လိုက်သေးတယ်..။
အဲဒီလို.. မဏ္ဍိုင်ကြိးတွေ.. ဟန်ချက်ညီ ကစားလာဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာပါ..။
မြန်မာပြည်ပုံစံနဲ့က မီဒီယာနဲ့ ထိန်းလို့ရပါတယ်…(တစ်ချို့တစ်ဝက်ပေါ့)
ဘာကြောင့်ဆို ရှက်တတ်ကြတာရယ်. သူများ အပြောအဆိုသိပ်မခံချင်တာရယ်လည်းပါတယ်..
အဲ.. နောက်ပြီး… တစ်လောက ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ.. ထွေအုပ်က ဒုဦးစီးတစ်ယောက် လာဘ်စားတဲ့ကိစ္စကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ..တင်လိုက်တာ.. စစ်မေးတာကို အတော်ခံလိုက်ရတယ်…
ဒါဆိုရင် .. သူ တော်တော်တန်တန်တော့ ဖြုံသွားပြီ.. ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင်… တော်ရုံသင့်ရုံဆို ရှောင်တော့တာပေါ့.. ခုဆို အရိုးကြည့်စားနေလောက်ပြီ.. (နည်းနည်းတော့ ပြဿနာရှာတာပေါ့.. ဘယ်သူလုပ်တာလဲ.. ဘာလဲပေါ့…)
ဒါမျိုးဆိုရင်…အရေအတွက်နဲ့ အကြိမ်ရေ နည်းသွားပြီ…
ပြီးတော့ လူတွေကလည်း မကျေနပ်မှသာ တိုင်ကြတောကြတယ်.. အဲဒါလေးနည်းနည်းခက်တာ..
လာဘ်စားမှုမှာလည်း ဘယ်နှစ်မျိုးလောက်ရှိမယ် မသိပေမယ့်..
အပေးအယူသဘောမျိုးမှာ.. နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကျေနပ်ပြီး.. အခြားလူကိုလည်း မထိခိုက်ဘူးဆို ပြဿနာသိပ်မရှိပါဘူး…
ဥပမာ… လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုအတွက် အဆင်ပြေအောင် ကူညီလို့… မြန်မြန်ပြီးပြတ်အောင်လုပ်ပေးလို့.. ပေးရတာမျိုး…
နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့.. ဒါ မလာရင်တော့.. ဒါ မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီး.. ညစ်တာမျိုး….
အဲဒီကိစ္စမှာ တစ်ဖက်လူလည်း အခက်အခဲဖြစ်နေနိုင်တယ်..ဆိုရင်.. မတရားတဲ့နည်း ဖြစ်သွားပြီ….
ဒါမျိုးကြတော့ တိုင်သင့်တယ်.. ကိုယ့်ဘက်က အချက်အလက်ကို စုဆောင်းပြီး…တိုင်သာတိုင်ဗျာ….
nature ပြောသလိုပါပဲ.. အူမ မတောင့်ရင်တော့ သီလစောင့်ဖို့ခက်နေဦးမှာပါ…
အူမတောင့်ရဲ့သားနဲ့ သီလမစောင့်ရင်တော့… ဆော်ပလော်တီးလို့လွယ်ပေမယ့်…
အူမမတောင့်လို့ သီလမစောင့်တာကျတော့ တုန့်ပြန်ဖို့ခက်ပါတယ်..
လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့… အစိုးရ၀န်ထမ်းများကို အမှန်တစ်ကယ်လုံလောက်သော လစာငွေ…ဖန်တီးပေးသင့်ပါတယ်..
အမှန်တစ်ကယ်လုံလောက်သော လစာငွေသာ ဖန်တီးပေးခဲ့ရင်..
၀န်ထမ်းများအနေနဲ့ကလည်း ပိုလျှံသော စုဆောင်းငွေများနဲ့.. နီးစပ်ရာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် မိတ်သင်္ဂဟများ..ဆွေမျိုးများထံမှာ..တရားဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားနိုင်ပါတယ်..
အဲဒီလို လုပ်ရင်းနဲ့မှ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူများရှိလာခဲ့ရင်…
ယူအက်စ် နည်းရော.. တရုတ်နည်းရော ပေါင်းပြီးတော့သာ ဆော်ပေတော့….
ဒါမှလည်း.. နိုင်ငံရဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်များ ဖြစ်တဲ့ ဥပဒေပြုရေး.. အုပ်ချုပ်ရေး.. တရားစီရင်ရေး တွေမှာ.. သမာသမတ်ကျမှုများရှိလာမှာပါ… ပြီးတော့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ မီဒီယာကလည်း အရေးပါလှပါတယ်..
အဲဒီလို နိုင်ငံရဲ့ မဏ္ဍိုင်များ ခိုင်မတ်ပါမှ.. အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြစ်တဲ့..
အဲ…လက်ရှိ သမ္မတက ရှည်ကဲပြီး…. သူတို့…ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ မယူပါဘူးဆိုတာ…နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာကို ချွေတာသလိုလိုနဲ့… လွှတ်တော် အမတ်မင်းများကို အငတ်ထားသလို ဖြစ်နေရင်ဖြင့်… အူမ မတောင့်လို့ သီလမစောင့်နိုင်ကြရင်ဖြင့်…..တစ်ကယ်ကို မတွေးဝံ့စရာပါ…